Nolazain’ny BBC Fa Ny ‘Orinasa Rosiana Mpandoto Resaka’ No Manao Hosoka Lahatsary Mampiseho Miaramilan’i Etazonia Iray Mitifitra Korany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Mey 2016 5:05 GMT
“Fitsapana Saiga 410K.” Sary : Mayaese Johnson / YouTube
Tahaka ny mampiseho lehilahy manao fitafy miaramilan'i Etazonia manao tifitra in-telo amin'ny dika petaky ny Korany ny lahatsary. Nivoaka tamin'ny Septambra 2015 izy io ary niteraka fahalianana tsy mahazatra tao Rosia, niteraka tsikera mamaivay avy amin'ny fiarahamonina miozolomana ao amin'ny firenena. Araka ny tatitry ny famotopotorana nataon'ny servisin'ny BBC amin'ny teny rosiana, dia tao amin'ny Orinasa mpandoto resaka na “troll factory” tao St. Petersburg, Agency for Internet Studies [Sampam-pikarohana an'Aterneto] no tena nakana ny lahatsary.
Tao amin'ny lahatsary mampiady hevitra, lehilahy iray matroka volon-koditra mitafy fanamian'ny miaramilan'i Etazonia no mitsapa basilava iray mamahan-tena vita Rosiana Saiga 401K tamin'ny alalan'ny fitifirana im-polo tamin'ny boky iray voasoratra amin'ny teny Arabo, mitovitovy amin'ny Korany. Raha bala telo monja no nahavoa ny lasibatra, dia nampiasa teny vetaveta amin'ny firoky tsy Amerikana mihitsy no niteny fa tsy mety ilay fitaovam-piadiana. Ny lahatsary, izay ahitana dikantsoratra diso fitsipi-pitenenana, no namehy tamin'ny fanambarana hoe, “Ity anankiray ity no manaporofo fa ny fitaovam-piadiana Amerikana ihany no tsara indrindra [sic].”
Ny andro nivoahan'ny lahatsary tao amin'ny YouTube ihany dia nisy nizara tao amin'ny National Gun Forum, izay mampiatrano ny “fifanakalozan-kevitry ny manam-pireharehana ho tompom-basy” ny lahatsary. Ao indray dia ny mpisera antsoina hoe “Derr86” no nilaza taminy fa ny namany no niezaka nandresy lahatra azy tsy hividy Saiga 410K satria “sombim-piringa” fotsiny iny. Derr86 niteny fa ny namany “Iza aloha no ao amin'ny “marine” raha miresaka ihany, Oorah!” ihany koa no nandefa ho azy ny lahatsary YouTube manasongadina ilay lehilahy mitafy fitafiana miaramilan'i Etazonia mitsapa ilay basilava amin'ilay boky amin'ny teny arabo. Vao folo andro no nisoratan'i Derr86 anarana tao amin'ny forum ary tsy navitrika intsony izy avy eo.
Tahaka ny tsy misy mahatsikaritra (na miraharaha) ao amin'ny forum fa ilay lehilahy ao amin'ny lahatsary, dia manao ny fanamiana miaramilan'i Etazonia fiafenana any amin'ny teny hay fahita any amin'ny trano manokana fivarotana ireny fomba fitafiana ireny. Nanamarika ihany koa ny BBC fa tsy satrobin'ny miaramilan'i Etazonia no isatrohan'ilay lehilahy fa “Ops-Core FAST Base Jump helmet”. (Misy soratra aza eo amin'ny satroby hoe “INFIDEL STRONG.”) Ny kaonty YouTube namoaka ny lahatsary dia misoratra amin'ny anarana tsy mahazatra hoe “Mayaese Johnson,” izay hita ao amin'ny Google Plus ho mpiasa amin'ny lisea iray ao Moskoa.
Any an-toerankafa ao amin'ny Google Plus, mitatitra ny BBC, fa tokotokony ho 50 ny kaonty hafa manana fanombohan'anarana “Mayaese,” ary maro amin'ireo olona ireo ihany koa no milaza fa miasao ao amin'ny lisea ao Moskoa ry zareo. Foana tsy misy an inona na inona ny kaonty Google Plus an-dry zareo, (tahaka ny) natsangana hanampy “likes” (sitraka) amin'ny lahatsary ao amin'ny YouTube, hoy ny tombatomban'ny BBC.
Tamin'ny 11 Septambra 2015, mbola maro ny sary avy amin'ny lahatsary no nivoaka tao amin'ny kaonty Twitter an'olon-tsy fantatra @ComradZampolit (izay manana mpanjohy mihoatra ny 33.000), ary avy eo tamin'ny kaontin'olona hafa malaza kokoa, @NovostiSPb (izay manana mpanjohy mihoatra ny 81.000). Samy miteny ireo kaonty ireo fa nitifitra tao amin'ny Korany ilay miaramila, na dia tsy mametraka izany mazava mihitsy aza ny lahatsary.
Nahita lahatsary ahitana Amerikana nitifitra Korany. Tsy nampianatra azy ireo ve ny ranomason'ny 9/11-ndry zareo fa tsy azo atao ny misangisangy amin'ny Islamo?
Matetika ny kaonty Twitter an'ny NovostiSPb no mizara rohy avy amin'ny sampam-baovao tahaka ny Nevskie Novosti, izay taterin'ny gazety sy aporitsaky ny mpijirika an-tserasera ho natsangan'ny olona manana fifandrohizana amin'ilay mpandraharaha Evgeny Prigozhin, izay heverina ho nanokatra ny Orinasa mpandoto resaka na “troll factory” tao St. Petersburg izay antsoina hoe Agency for Internet Studies [Sampam-pikarohana an'Aterneto]. Tao anatin'ny ora vitsivitsy taorian'ny nanairan'ireo kaonty Twitter ireo tamin'ny alalan'ny lahatsary, dia nizara azy ihany koa ny vondrom-piarahamonina ao amin'ny Facebook sy ny Vkontakte.
Telo andro taty aoriana ilay lahatsary no nanomboka nipoitra ao amin'ny forums “malaza amin'ireo orinasa mpandoto resaka,” hoy ny BBC, manondro ireo tranonkala tahaka ny Maxpark, Dirty.ru, ary YaPlakal, sy tao amin'ny sampam-baovao pro-Kremlin sasantsasany, tahaka ny Politonline.ru.
Ny sehatra fampitam-baovao voalohany nanaitra ny fifantohana hijery ilay lahatsary, araka ny nolazain'ny BBC, dia tranonkala iray nantsoina hoe Vaovaom-Bahoaka, izay misoratra anarana ao amin'ny laharan-trano 55 Lalana Savushkina ao St. Petersburg—mitovy adiresy amin'ny Agency for Internet Studies [Sampam-pikarohana an'Aterneto], ilay “troll factory” [Orinasa Mpandoto Resaka] miorina ao Rosia. Araka ny nolazain'ny loharanom-baovaon'ny BBC, mampanofa lohamilina virtoaly maromaro ny sampam-pikarohana hanafenana ny zavatra ataony an-tserasera. Milaza ny BBC fa manana ny lisitry ny adiresy IP ampiasain'ny sampam-pikarohana, ary tsikaritra fa ny adiresy IP voalohany ao amin'ny lisitra, di anampiasaina hampiroboroboana ilay lahatsarin'ny mpitifitra Korany ao amin'ny forum miorina ao Saratov.
Niteny aza ny BBC fa nahita lehilahy mitovitovy amin'ilay lehilahy mpitana basy tao amin'ny lahatsary, nahita ny sariny tamin'ny karoka tao amin'ny Instagram amin'ny sary voafangitra ara-jeografika manakaiky ny laharan-trano 55 Lalana Savushkina. Nilaza ireo Britanika mpanao gazety fa ilay lehilahy, izay manao ny asan'ny mpitana bara ao St. Petersburg, dia minamana amin'ny vehivavy iray izay fantatra fa miasa amin'n'ny “orinasa mpandoto resaka.”
Tsy nety niresaka tamin'ny BBC izy sy izay rehetra noheverina ho miasa ho an'ireo mpandoto rano [resaka].